စရိုက်နဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်း | " မနာပဒါယီ "
။ အချိန် 8/06/2012 07:16:00 AM
လောကမှာ လူအမျိုးမျိုး စရိုက်အမျိုးမျိုး ရှိကြတယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့် ဗုဒ္ဓစာပေနဲ့ ခွဲခြားကြည့်လိုက်ရင် စရိုက် (၆)မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း မတူညီတဲ့ စရိုက်တစ်မျိုးစီ ဒါမှမဟုတ် နှစ်မျိုး၊ သုံးမျိုးစသည် ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘာစရိုက်အားကြီးတယ် ဆိုတာကိုတော့ ဒီစရိုက်ခြောက်ပါးနဲ့ ညှိကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စရိုက်ခြောက်ပါးမှာ ရာဂစရိုက်ရှိသူနဲ့ သဒ္ဓါစရိုက်ရှိသူဟာ သွားလာနေထိုင်၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ပုံချင်း တူညီတတ်ပြီး ဒေါသစရိုက်ရှိသူနဲ့ ဗုဒ္ဓိ(ပညာ)စရိုက်ရှိသူဟာလည်း အနေအထိုင် အပြောအဆို အစားအသောက် တူညီတတ်ကာမောဟစရိုက်ရှိသူနဲ့ ၀ိတက်စရိုက် ရှိသူမှာလည်း အလုပ်အကိုင် အပြောအဆို အစားအသောက်မှအစ တူညီနေတတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ရာဂစရိုက်ရှိသူနဲ့ သဒ္ဓါစရိုက်ရှိသူ နှစ်ဦးလုံးဟာ အသွားအလာ အနေအထိုင် အပြောအဆို ယဉ်ကျေးတတ်၊ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေတတ်ထိုင်တတ် လုပ်ကိုင်တတ်၊ အနံ့အသက်ကောင်းကောင်း အစားအသောက် ကောင်းကောင်းနဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုများကို နှစ်သက်တတ်ပါတယ်။ ထူးခြားမှုက ရာဂစရိုက်ရှိသူဟာ ကာမဂုဏ်အာရုံများကို မခွဲနိုင်မခွါရက်အောင် စွဲမက်တတ်၊ ပရိယာယ်မာယာများတတ်၊ စဉ်းလဲကောက်ကျစ်တတ်၊ လောဘမာန အားကြီးတတ်ပြီး သဒ္ဓါစရိုက် အားကြီးသူကတော့ ပရိယာယ်မာယာနှင့် လောဘမာနများ အလွန်မကြီးမားဘဲ စွန့်ကြဲပေးကမ်း လှူဒါန်းမှုမှာ ပျော်မွေ့တတ်၊ ဘုရားကျောင်းကန်များတွင် ၀တ်တွားဆည်းကပ်တတ်၊ ရတနာသုံးပါးအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု အားကောင်းတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ သဒ္ဓါစရိုက်အားကြီးပြီး ပညာအားနည်းတဲ့အတွက် အလွဲကိုးကွယ်မိတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒေါသစရိုက်ရှိသူနဲ့ ဗုဒ္ဓိခေါ် ပညာစရိုက်ရှိသူ နှစ်ဦးလုံးဟာ အသွားအလာ အနေအထိုင် အပြောအဆို ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတတ်၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေထိုင်လုပ်ကိုင်မှု မရှိဘဲ ဖြစ်သလို ဖရိုဖရဲ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်၊ အချဉ်အငန် အစပ်အခါး စတဲ့ စူးစူးရှရှ အရသာတွေမှာ နှစ်သက်တတ်၊ မကောင်းတဲ့အဆင်းအသံ စတာတွေနဲ့ တွေ့ကြုံတဲ့အခါ သည်းခံအောင်အည်း ချုပ်တည်းခြင်းမရှိဘဲ ချက်ချင်းဆဲဆို ငေါက်ငမ်းကာ စိတ်ကြမ်းစိတ်တို လွယ်တတ်ပါတယ်။ ကွဲပြားတာကဒေါသစရိုက်ရှိသူဟာ ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း အာဃာတ၊ မနာလိုခြင်း ဣဿာ၊ ၀န်တိုခြင်း မစ္ဆရိယ၊ သူတစ်ပါးဂုဏ်ကို ဖျက်ဆီးလိုခြင်း မက္ခ၊ ဂုဏ်တူဂုဏ်ပြိုင်ပြုခြင်း ပဠာသ၊ အဆုံးအမခက်ခြင်း ဒုဗ္ဗစတရားများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတတ်ပြီး ဗုဒ္ဓိစရိုက်ရှိသူကတော့ ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း၊ မနာလိုခြင်း၊ ၀န်တိုခြင်း စတဲ့တရားများမရှိဘဲ ဆိုဆုံးမလွယ်တတ်၊ စားသောက်ဖွယ်မှန်သမျှမှာ နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် ပြုတတ်၊ နောင်သံသရာအတွက် သတိပညာဖြင့် ကောင်းစွာမြော်မြင်ကာ ပါရမီကုသိုလ်များကို ကြိုးစားပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။
မောဟစရိုက်ရှိသူနဲ့ ၀ိတက်စရိုက်ရှိသူ နှစ်ဦးလုံးရဲ့ သဘောလက္ခဏာဟာလည်း တူညီနေတတ်ပါတယ်။ အသွားအလာ၊ အပြောအဆို အနေအထိုင်က အစပေါ့။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားချက်က မောဟစရိုက်ရှိသူဟာ မေ့မေ့လျော့လျော့ ပေါ့ပေါ့ဆဆ ရှိတတ်၊ ကိစ္စအထွေထွေ ပွေလိမ်ရှုတ်ထွေးတတ်၊ အစားအသောက်မှာလည်း တစ်သမှတ်တည်းမရှိ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို နှစ်သက်တတ်၊ အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုးကို ခွဲခြားသိမြင်မှု မရှိတတ်ဘဲ သူများချီးမွန်းရင် လိုက်ချီးမွန်းတတ်ကာ သူများကဲ့ရဲ့ရင်လည်း လိုက်ကဲ့ရဲ့တတ်၊ သတိပညာကင်းပြီး ထိုင်းမှိုင်းခြင်း ထိနမိဒ္ဓ၊ ပျံ့လွင့်ခြင်း ဥဒ္ဓစ္စတို့နှင့် အချိန်ကုန်တတ်ပြီး ၀ိတက်စရိုက် ရှိသူကတော့ ဟိုဟိုဒီဒီ ကိစ္စများများမှာ အကျိုးမပြီး အချည်းနှီးဖြစ်နေတတ်၊ စကားပေါကာ ကိစ္စမချောဘဲ မျောနေတတ်၊ ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းများမှာ အစွမ်းအစမရှိဘဲ ပျင်းရိနေတတ်၊ ကိုယ်လိုပေါ့ပေါ့တန်တန် လူများနဲ့ပျော်မွေ့ကာ ထွေရာလေးပါး အကြံများပြီး လူအားလူပိုသာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ သတ္တ၀ါများ ရှိတတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်ရဲ့ သဘောတရားအချို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း စရိုက်တစ်ခုခုကတော့ အားကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့စရိုက်အားကောင်းနေတာ ရှိတတ်သလို မကောင်းတဲ့စရိုက် အားကောင်းနေတာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့စရိုက် အားကောင်းနေရင်လည်း ဒီစရိုက်ကို ဆက်လက်တိုးပွားအောင် ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်သလို မကောင်းတဲ့စရိုက် အားကောင်းနေရင်လည်း တတ်နိုင်သမျှ ပြုပြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ မကောင်းတဲ့အရာတွေမှာ ပျော်မွေ့တတ်တဲ့ ၀ါသနာစရိုက်ဟာ ကိလေသာများရဲ့ အားအစွမ်းဖြစ်နေတတ်ပြီး ကောင်းတဲ့အရာတွေမှာ ပျော်မွေ့တတ်တဲ့ ၀ါသနာစရိုက်ကတော့ ကောင်းတဲ့အလို သမ္မာဆန္ဒဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့စရိုက်ကို မှန်ကန်တဲ့ နည်းနဲ့အသုံးချနိုင်ရင် နိဗ္ဗာန်အထိ ရောက်နိုင်သလို မကောင်းတဲ့ စရိုက်ကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ ပြုပြင်နိုင်လျှင် နောင်သံသရာအတွက် ဒီစရိုက်များ လိုက်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ မပြုပြင်ရင်တော့ ကောင်းတဲ့စရိုက်လည်း မကောင်းတဲ့ဘက် ပါသွားတတ်ပြီး မကောင်းတဲ့စရိုက်ကတော့ အပါယ်အထိလားကာ ဘ၀အဆက်ဆက် နိမ့်ကျမှု သက်သက်ကိုပဲ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်မှာ ဘယ်လိုစရိုက်မျိုး ရှိတယ်၊ ဘယ်လိုစရိုက် အားကောင်းတယ်ဆိုတာကို ဆင်ခြင်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ကြည့်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာတော့ စရိုက်တွေကို ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာဟာ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီစရိုက်ခြောက်ပါးနဲ့ တွဲစပ်ပွားများရမယ့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲဒီဖော်ပြချက်က..
၁။ ရာဂစရိုက်အားကြီးသူဟာ စက်ဆုတ်ဖွယ် အကောင်ပုတ်လို့ ရှုရတဲ့ အသုဘ ကမ္မဋ္ဌာန်း ၁၀ပါးနဲ့ ဆံပင်အမွေး ခြေသည်းလက်သည်း စတဲ့ ၃၂ကောဋ္ဌာသကို ရှုဆင်ခြင်ရတဲ့ ကာယဂတာသတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများခြင်းဖြင့် ရာဂစရိုက်ကို ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဆယ့်တစ်ပါးထဲက သင့်လျော်ရာ တစ်ပါးပါးကို ပွားများပါးများလာရင် ရာဂမီးကို ငြိမ်းအေးစေနိုင်ပါတယ်။
၂။ ဒေါသစရိုက် အားကြီးသူဟာ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ကမ္မဋ္ဌာန်းများနဲ့ နီလကသိုဏ်း (အညိုရောင်အဆင်း)၊ ပီတကသိုဏ်း (ရွှေရောင်အဆင်း)၊ လောဟိတကသိုဏ်း (အနီရောင်အဆင်း)၊ သြဒါတကသိုဏ်း (အဖြူရောင်အဆင်း) ဆိုတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်း ၈ပါးကို ပွားများခြင်းဖြင့် ဒေါသစရိုက်ကို ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းများဟာ သန့်ရှင်းကြည်လင်တဲ့အတွက် အာရုံပြုပွားများသူများကို စိတ်ရွှန်လန်းပြီး နူးညံ့မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါသစရိုက်အားကြီးတဲ့သူဟာ ဒီကမ္မဋ္ဌာန်း ဂပါးထဲက တစ်ပါးပါးကို ပွားများသင့်ပါတယ်။
၃/၄။ မောဟစရိုက်နဲ့ ၀ိတက်စရိုက်ရှိသူများဟာ အာနာပါနဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မောဟစရိုက်ရှိသူဟာ သံသယနဲ့ ပျံ့လွင့်ခြင်းတို့ အဖြစ်များတဲ့အတွက် အလွယ်တကူ စိတ်ပျံ့လွင့် တုန်လှုပ်တတ်ပြီး ၀ိတက်စရိုက်ရှိသူဟာလည်း စိတ်ကူးအကြံအစည် များတဲ့အတွက် စိတ်ပျံ့လွင့်လွယ်တတ်ပါတယ်။ အာနာပါနဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်းဟာ ထွက်သက်ဝင်သက်တို့ကို အချက်ကျကျ လိုက်၍ ရှုမှတ်ပေးရတဲ့အတွက် တုန်လှုပ်ပျံ့လွင့်တဲ့စိတ်ကို ချုပ်ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမောဟစရိုက်နဲ့ ၀ိတက်စရိုက် ရှိသူဟာ အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကို အထူးပြု ပွားများသင့်ပါတယ်။
၅။ သဒ္ဓါစရိုက်ရှိသူဟာ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ၊ ဓမ္မာနုဿတိ၊ သံဃာနုဿတိ၊ သီလာနုဿတိ၊ စာဂါနုဿတိ၊ ဒေ၀တာနုဿတိ ဆိုတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်း ခြောက်ပါးကို ပွားများပေးရပါတယ်။ ပင်ကိုက ကောင်းနေတဲ့ သဒ္ဓါတရားဟာ ဘုရားတရားသံဃာ စတဲ့အာရုံများနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါက ပို၍ဖွင့်ဖြိုး တိုးတက်လာပြီး အကျိုးတရား တိုးပွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်းပြီးသားစရိုက်ကို ပိုကောင်းလာအောင် ဒီသဒ္ဓါစရိုက် ရှိတဲ့သူဟာ ဗုဒ္ဓါနုဿတိစတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်း ခြောက်ပါးထဲက တစ်ပါးပါးကို ပွားများသင့်ပါတယ်။၆။ ပညာစရိုက်ရှိသူဟာ သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ သေခြင်းတရားကို ဆင်ခြင်တဲ့ မရဏာနုဿတိကမ္မဋ္ဌာန်း၊ နိဗ္ဗာန်ကို ဆင်ခြင်တဲ့ ဥပသမာနုဿတိ ကမ္မဋ္ဌာန်း၊ အစာအဟာရမှာ စက်ဆုတ်ဖွယ်လို့ ထင်မြင်အောင် ပွားများတဲ့ အာဟာရေ ပဋိကူလသညာ ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယောလို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်ကြီးလေးပါးကို ပိုင်းခြားဆင်ခြင်တဲ့ စတုဓာတု၀၀တ္ထာန ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများပေးရပါတယ်။ ပင်ကိုက စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်တဲ့ ပညာဟာ သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ အာရုံနဲ့ ကြုံတွေ့တဲ့အခါ ပိုပြီးနက်နက်နဲနဲ စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အတွက် ဉာဏ်ပညာတိုးပွား ထက်မြက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညာစရိုက်အားကြီးတဲ့သူဟာ မရဏာနုဿတိ စတဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်းများကို ပွားများပြီး ဉာဏ်အဆင့်တိုးပွားအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ဒီဖော်ပြချက်ကတော့ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာ ပါရှိတဲ့ စရိုက်နဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်း တွဲစပ်ပွားများသင့်တာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ ဒီစရိုက်ခြောက်ပါးနဲ့ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ရှိနေတဲ့ စရိုက်တွေကို ချိန်ထိုးပြီး ကိုယ်နဲ့သင့်လျော်မယ့် ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်သန္တာန်မှာ ကောင်းတဲ့စရိုက်ရှိရင်လည်း ဒီစရိုက်ကို ပိုပြီးတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်၊ မကောင်းတဲ့စရိုက်ရှိရင် ဒီမကောင်းတဲ့စရိုက်ကို နောက်သံသရာအထိ မပါစေရန် အချိန်မီ ပြုပြုနိုင်အောင် လိုအပ်သင့်လျော်မယ့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကို ပွားများသင့်ပါတယ်။ ၀ိပဿနာအလုပ်ဟာ ကိလေသာကုန်ခမ်း နိဗ္ဗာန်ရရေးအတွက် အဓိကကျတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီဘ၀မှာလိုအပ်တဲ့ ချမ်းသာနဲ့ နိဗ္ဗာန်မရခင် ကျင်လည်ရမယ့် ဘ၀ချမ်းသာအတွက် တစ်ဘက်ကလည်း ကိုယ့်စရိုက်နဲ့ သင့်မယ့်ကမ္မဋ္ဌာန်း တစ်ခုခုကို ပွားများပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အရိယာမဂ်နဲ့ ကိလေသာများနဲ့ စရိုက်များကို အကြွင်းမဲ့မပယ်သတ်နိုင် သေးပေမယ့် အခိုက်အတန့် အချိန်အတော်ကြာကြာ ခွာထားနိုင်အောင် ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားများပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မကောင်းတဲ့ စရိုက်များကို ကောင်းအောင် ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ ပြုပြင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာ၊ စိတ်အကြံအစီများကို နူးညံ့သိမ်မွေ့လာအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ သိစေချင်တာက လူအမျိုးမျိုး စရိုက်အမျိုးမျိုး ရှိတတ်တဲ့ လောကကြီးမှာ ကိုယ်လည်း စရိုက်တစ်မျိုးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူထဲမှာ ပါနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းတဲ့စရိုက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတဲ့ စရိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုစရိုက်မျိုးကို မဆို ကိုယ်နဲ့သင့်လျော်မယ့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကို ပွားများရင်း ကောင်းတဲ့စရိုက်ကိုလည်း ပိုပြီးတိုးပွားအောင်၊ မကောင်းတဲ့စရိုက်ဆိုရင်လည်း ပိုပြီးဆိုးမလာအောင် ပြုပြင်ကြည့်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် အထုံပါနေတဲ့ စရိုက်လည်း အထိုက်အလျောက် ပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့အတွက် လက်တွေ့ပွားများကာ လေ့ကျင့်ကြည့်ကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကိုယ့်စရိုက်နဲ့ သင့်လျော်မယ့် ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကို အချိန်ယူပြီး ပွားများပြုပြင် ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အမူအရာ စတာတွေဟာ ပြောင်းလဲနူးညံ့လာမယ်ဆိုတာ သေချာပါကြောင်း…
မှတ်ချက်။ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ၊ အခြေပြုသင်္ဂြီုဟ်နှင့် ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်၏ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ်တို့ကို ကိုးကားပြီး ရေးသားတင်ပြပါသည်။
ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ရှိခိုးကန်တော့လိုက်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကဒေါသစရိုက်အားကြီးသူပါ ပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားရင်း ဒေါသ နောက်ပါသွားရင်းနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုမနိုင်ပါဘုရားပင်ပန်းလှပါတယ်ဘယ်သူ့ ကိုမှမေတာပို့ လို့ မရပါ တပည့် တော်အားသနားသောအားဖြင့်ဆုံးမ ပြုပြင်ပေးပါဘုရားတပည့်တော်ဆိုးမိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုးလွန်းမိုက်လွန်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားအားထုတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား တရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြစ်မှားစော်ကားခဲ့တဲ့သူတွေကိုတောင်းပန်ပြီးမှအားထုတ်လို့ ရတယ်ဆိုတာမှန်ပါသလားဘုရား. ရိုသေလေးစားအားကိုးစွာဖြင့်ဦးတင်လျှက်.
အမှားကတော့ လူတုိုင်း လုပ်ဖူးကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်တော့မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအမှားကို သိပြီး ပြုပြင်နုိုင်တာကတော့ အဆန်းဖြစ်သွားပါပြီ။ သိလုိုက်တဲ့အချိန်ဟာ နောက်ကျတယ်ဆုိုတာ မရှိပါဘူး။ အတိတ်ဆုိုတာ ပြန်တောင့်တဖုို့ မဟုတ်ဘဲ အတိတ်ကုို သင်ခန်းစာယူပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ ကောင်းအောင် ကြိုးစားဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုိုတော့ကား အဲဒီလုို အတိတ်က ဆုိုးခဲ့ မိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ဒီအပြစ်တွေကြောင့် တရားအားထုတ်လုို့ ရပါမလားဆုိုတာကတော့ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေဟာ အမေသတ်တဲ့ကံ၊ အဖေသတ်တဲ့ကံ၊ ရဟန္တာကုို သတ်တဲ့ကံ၊ ဘုရားကုို သွေးစိမ်းတည်အောင် လုပ်တဲ့ကံ၊ သံဃာသင်းခွဲတဲ့ ကံဆုိုတဲ့ ပဉ္စာနန္တရိယ ငါးပါးထဲက တစ်ပါးမှ မပါဘူးဆုိုရင် ကျန်တဲ့ မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေဟာ ကုသုိုလ်တရားနဲ့ လွှမ်းမုိုးသွားအောင် လုပ်နုိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပဉ္စာနန္တရိယကံကုို ကျူးလွန်မိရင်တော့ ဘုရားတောင် ကယ်လုို့မရနုိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မေးခွန်းရှင်အနေနဲ့လည်း ကုိုယ့်ရဲ့ အတိတ်ကုို သိပ်ပူဆွေးမနေဘဲ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ဗန်မှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ပြစ်မှားစော်ကားခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်ရှိထင်ရှား ရှိသေးရင်တော့ လက်တွေ့တောင်းပန်ပြီး ကုိုယ့်အပြစ်ကုို ခွင့်လွှတ်ဖုို့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မရှိတော့ရင်တော့ မတတ်နုိုင်ဘူးပေါ့။ မရှိတော့တဲ့ အပေါ်မှာလည်း ဒီနောင်တတွေ ကုိုယ့်စိတ်ထဲမှာ မရှိအောင် ကြိုးစားပြီး ကောင်းမှုတွေနဲ့ အစားထုိုးကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆုိုရင်တော့ ကုိုယ့်စိတ်ဟာ တဖြည်းဖြည်း သက်သာလာပြီး ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုိုလည်း ထိန်းသိမ်းလာနုိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။